Nanmalgyi - Page 800 of 918 - News & Entertainment
February 22, 2018 Aung Thant 0
ဒန့်သလွန်သီးက အစာအိမ်ရောဂါတွေကို ကုသရာမှာ အထူးထိရောက်ပါတယ်။ ၁ – အသည်းကို ကာကွယ်ပေးတယ် ဒန့်သလွန်သီးမှာ ဗီတာမင် စီ၊ ferulic အက်ဆစ်နဲ့ catechin တွေ ပါဝင်ပါတယ်။ ဆေးဝါးနဲ့ အခြားကိစ္စတွေကြောင့်ဖြစ်ပွားတဲ့ အသည်းထိခိုက်မှုကို မြန်မြန်ဆန်ဆန်ပြန်ကောင်းလာဖို့ ကူညီပေးပါတယ်။ ၂ – ပိုးသတ်ပေးတယ် ဒန့်သလွန်ရွက်ကို […]
ကားပေါ်မှာလူပျိူကြီးနဲ့ကောင်မလေး အတူဆုံတော့ ကောင်မလေးက သူ့ခြေသလုံးဝင်းဝင်းလေးကို မမြင်မြင်အောင်ပြတယ်
February 21, 2018 Aung Thant 0
ကားပေါ်မှာလူပျိူကြီးနဲ့ကောင်မလေးအတူဆုံတော့ ကောင်မလေးကသူ့ခြေသလုံးဝင်းဝင်းလေးကို မမြင်မြင်အောင်ပြတယ်။ အဲဒီမှာ…လူပျိုကြီးက အတင့်ရဲပြီး… “နင့်စကပ်ကိုအပေါ်နည်းနည်းတင်ပေးရင် ပိုင်ဆံတစ်သောင်းပေးမယ်”ဆိုတော့ ကောင်မလေးကပိုက်ဆံကိုတခါတည်းတောင်းပြီး စကပ်ကိုအပေါ်တင်ပေးတယ်။နောက်…ညု့တုတုနဲ့ကြည့်ပြီး ကောင်မလေးက “ရှင်နောက်ထပ်တစ်သောင်းထပ်ပေးရင်ရှင့်ကို ကလေးမွေးတဲ့နေရာပြမယ်”။ “ဟာ…လူပျိုကြီးတံတွေးသီးသွားတယ်”ပိုက်ဆံတစ်သောင်းကိုလည်းလျှောလျှောလျူလျူ ထုတ်ပေးလိုက်တယ်။ကောင်မလေးက ကားရဲ့ညာဘက်ခြမ်းကိုလက်ညိုးထိုးပြလိုက်တယ်။ “တွေ့လား…ရန်ကုန်အမျိုးသမီးဆေးရုံကြီး…. ရယ်​​မောချင်းဖြင့်​ဘ၀အ​မောများ​ပြေ​​ပျောက်​နိုင်​ကြပါ​စေ …. Credit to Op Ph…cd Unicode ကားပျေါမှာလူပြိူကွီးနဲ့ကောငျမလေးအတူဆုံတော့ ကောငျမလေးကသူ့ခွသေလုံးဝငျးဝငျးလေးကို […]
အမြန်လမ်းမှာ အိုဗာ Speed မောင်းတဲ့ ကားတွေ အမှန်ကန်ဖမ်းနေကြောင်း။ ၁ ရက်အတွင်း ၁၄၅ စီးနော်
အမြန်လမ်း၌ သတ်မှတ်မိုင်နှုန်းထက် ပိုမိုမောင်းနှင်သော ယာဉ်များအရေးယူမှု နေပြည်တော်၊ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၁ ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီလ ၁၉ ရက်နေ့ ည ၆ နာရီမှ ဖေဖော်ဝါရီလ ၂၀ ရက်နေ့ ညနေ ၅ နာရီ အချိန်ထိ ရန်ကုန်-မန္တလေးအမြန်လမ်းမိုင်တိုင်(၂၀၁) နေပြည်တော်တိုးဂိတ်၌ သတ်မှတ်မိုင်နှုန်းထက် […]
တင်းတိပ်တွေဟာ မှဲ့လို မထူဘဲ ပါးလွှာပြီး အရွယ်အစား ပုံသဏ္ဍာန်မျိုးစုံဖြင့် မျက်နှာပေါ်မှာ ပေါက်လေ့ရှိပါတယ် ။ အရောင်အားဖြင့် အညိုရောင် ဖြစ်ကြပါတယ် ။ တင်းတိပ်ပေါက်ခြင်းဟာ အရေပြားဆိုင်ရာ ပျက်စီးမှုတစ်ခုပဲ ဖြစ်ပါတယ် ။ တင်းတိပ်ပေါက်ရတဲ့ အကြောင်းအရင်းတွေကတော့ နေပူထဲအထွက်များခြင်း ၊ ဟော်မုန်းမညီမျှခြင်း နှင့် မျိုးရိုးလိုက်ခြင်းကြောင့် […]
အ၀လွန်တာရဲ့ နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် ဒီလိုအံ့သြစရာဖြစ်ရပ် ၉ခုရှိလာခဲ့
February 21, 2018 Kaung Khant 0
အ၀လွန်တာရဲ့ နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် ဒီလိုအံ့သြစရာဖြစ်ရပ် ၉ခုရှိလာခဲ့ ၁။လူသတ်ဖို့အတွက် ၀လွန်းခြင်း ၂၀၀၈ခုနှစ်မတ်လတုန်းက အသက် ၃၁နှစ်အရွယ် Texan Mayra Rosales ဆိုတဲ့အမျိုးသမီးဟာ သူမရဲ့ အသက် ၂နှစ်အရွယ်တူလေး Eliseo Jr ကို ကလေးထိန်းနေရင်းမတော်တဆသူ့အပေါ်ထိုင်မိပြီး သတ်မိခဲ့တယ် လုိ့ရဲတွေကိုဝန်ခံခဲ့ပါတယ်။သူမရဲ့ကိုယ်အလေးချိန်က ၁၁၀၀ပေါင်ရှိပြီး ဆရာဝန်တွေက ဒီကလေးဟာ […]
၁- စားသောက်ဆိုင်တွေမှာ အသုံးပြုနေတဲ့ ဖေါ့ဘူးတွေဟာလည်း စတိုင်းရင်း (styrene)ဓါတ်ပါတဲ့ 2B ပလပ်စတစ်အုပ်စုဝင်တွေဖြစ်လို့ဖေါ့ဘူးတွေတစ်ခါသုံးပလပ်စတစ်တွေ လုံးဝ အသုံးမပြုကြရန်။ ၂-ကြက်သားမှုန့် တွင်လည်း အချိုမှုန့် နှင့် တာရှည်ခံ မှိုသတ်ဆေး၊များ ဓာတုပစ္စည်းများပါဝင်သဖြင့် အချိုမှုန့့် ထက်ပင်ပိုမိုဆိုးရွာစေပါသည်။ ၃- ဆာဖျူရစ်အက်ဆစ်ပြင်း H2SO4 ရောစပ်ထားတဲ့ […]
သာမာန်မိဘတွေထက် Single မိဘတွေရဲ့ အားသာချက်များ
သာမာန်မိဘတွေထက် Single မိဘတွေရဲ့ အားသာချက်များ #1. သင့်ရဲ့ ကိုယ်ပိုင်ဝင်ငွေနဲ့ သားသမီးအပေါ်ခွဲတမ်းချပြီး ကျန်တဲ့ငွေတွေကို အနာဂတ်လုပ်ဆောင်စရာ အစီအစဉ်မှာ ထည့်သွင်းလို့ ရပါတယ်။ဒါမှမဟုတ် ဖြုန်းလိုက်လဲ အဆင်ပြေပါတယ်။သင့် ဝင်ငွေကို တင်းကြပ်သူမရှိသလို လာရောက်ဖြုန်းပေးမယ့်သူလဲ မရှိပါဘူး။ #2. သင်ဟာ တစ်ဦးထဲ သားသမီးနဲ့ ရုန်းကန်ရင်ဆိုင်ရတဲ့အခါ သင့်ရဲ့ […]
ဒိန်းပိုပိုဒေါင်ကို ဗေဒင်ဆရာ အောင်ချစ်ပိုက အသရေဖျက်မှုဖြင့် တရားစွဲ =================== ဟာသသရုပ်ဆောင် ဒိန်းဒေါင်၏သမီးဖြစ်သူ ဒိန်းပိုပိုဒေါင်ကို ဖေဖော်ဝါရီလ ၂၀ ရက် မွန်းလွဲပိုင်းက စမ်းချောင်းမြို့နယ်တရားရုံးတွင် အသရေဖျက်မှု ပုဒ်မ ၅၀၀ ဖြင့် ဗေဒင်ဆရာ အောင်ချစ်ပိုက ဦးတိုက်လျှောက်ထား တရားစွဲဆိုခဲ့ကြောင်း တရားစွဲဆိုသူ ဗေဒင်ဆရာထံမှ သိရသည်။ […]
ကမ္ဘာ့ နိုင်ငံခေါင်းဆောင်တွေလစာ ဘယ်လောက်ရကြသလဲ ?
နိုင်ငံခေါင်းဆောင်တွေလစာ ဘယ်လောက်ရကြသလဲ ? လူတွေက တခြားလူတွေရဲ့လစာနဲ့ပတ်သက်ရင် အမြဲသိချင်စိတ်ပြင်းပြလေ့ရှိကြပါတယ်။ကျောင်းနေဖက်တွေ၊သူငယ်ချင်းတွေကတော့သူတို့ရဲ့ လစာနဲ့ပတ်သက်ပြီးသိပ်ပြောလေ့မရှိပေမဲ့ နိုင်ငံတော်သမ္မတတွေရဲ့ လစာကတော့ အားလုံးသိရှိနိုင်ပါတယ်။သမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်ရဲ့ တစ်နှစ်လစာက သင့်ရဲ့ တစ်လလစာထက်ပိုပြီးနည်းတယ်ဆိုတာသိရရင် အံ့သြကုန်ကြမလား?ကဲ နိုင်ငံခေါင်းဆောင်သမ္မတတွေရဲ့ လစာတွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီးဆက်ကြည့်လိုက်ရအောင်။ ၁။ Donald Trump ယူအက်စ်သမ္မတ Donald Trump ရဲ့ တစ်နှစ်စာလစာက […]
အနှစ်သာရ ကင်းမဲ့တဲ့ ရေပေါ်ဆီ relationship များ
အနှစ်သာရ ကင်းမဲ့တဲ့ ရေပေါ်ဆီ relationship များ ခိုင်​မာ​အောင်​ တည်​​ဆောက်​ကြမယ့်​ လက်​တွဲမှု Relationship တခုမှာ တ​ယောက်​ကိုတ​ယောက်​ ယုံကြည်​စိတ်​ချမှုရှိကြတာ၊ တ​ယောက်​ဖြတ်​သန်းမှု စိတ်​ခံစားမှုထဲ ​လေးနက်​မှုထားကြတာ၊ တ​ယောက်​ဘဝထဲ တ​ယောက်​ ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်​​အောင်​ တိုးဝင်​​နေထိုင်​ကြတာ ဟာ မရှိမဖြစ်​ လိုလာပါတယ်​။ ဒီလိုမှမဟုတ်​ပဲ ​လေးနက်​မှုမရှိအ​ပေါ်ယံသာသာ အ​ပျော်​တွဲသက်​သက်​က​တော့ […]
« 1 … 799 800 801 … 918 »
အွန်လိုင်းပေါ်က ပုံအလန်းတွေရဲ့ နောက်ကွယ်က စိတ်ပျက်စရာ လျှို့ဝှက်ချက်များ
Hailey နဲ့ ကွာရှင်းဖို့စဉ်းစားနေပြီဆိုတဲ့ Justin Bieber
အတူမရှိပေးနိုင်သော်လည်း သမီးမွေးနေ့မှာ Surprise အကြီးကြီးလုပ်ပေးခဲ့တဲ့ သန္တာလှိုင်
ဆမ သိမ်းခံရလည်း ယောကျာ်းထုကြီး အသည်းနှလုံးကို ထပ်မံဖမ်းစားလိုက်တဲ့ နန်းမွေစံ